Igumbi lokuhlambela endlwini, khetha ukuba ungene kwigumbi langasese lodonga? Okanye iNdlu yangasese yoMgangatho?
Ikhaya / Blog / Igumbi lokuhlambela endlwini, khetha ukuba ungene kwigumbi langasese lodonga? Okanye iNdlu yangasese yoMgangatho?
2021 / 04 / 12 uhleloBlog 4035 0
Ukulungiswa kwakhona kuninzi enokucinga ngako, thatha igumbi lokuhlambela, kukho indlu yangasese eseludongeni kunye nomgangatho wamanzi wokuhlambela ongaphantsi, ngoko ke kufuneka sizikhethe njani ezi zimbini? Namhlanje siza kuhlalutya iyantlukwano kunye noncedo kunye nokungalunganga kwezi ntlobo zimbini zangasese, ngokukhawuleza siziqonde.
Yintoni indlu yangasese eseludongeni?
Indlu yangasese eseludongeni ibizwa ngokuba yindlu yangasese ejingayo. Yenziwe ngetanki lamanzi ngaphakathi eludongeni kunye nomngxuma wokuhlala ngaphandle. Oku konga indawo kwaye kunika umbono wesitayile kwindlu yangasese, kongeza umoya ophakamileyo kwigumbi lethu lokuhlambela.
Yintoni indlu yangasese yomsele?
Igumbi langasese elisezantsi lolona hlobo luqhelekileyo lwendlu yangasese esinayo, apho indlu yangasese idiliza iye ezantsi. Umjelo wamanzi wokuhlala uhlala unjalo kangangokuba izindlu zangasese ezingasentla kunye nemibhobho yomjelo wamanzi idlula emhlabeni, yenza ukugoba kuphahla olungaphantsi, emva koko ungene kumbhobho wokuhambisa amanzi, nto leyo esihlala siyisebenzisa ngoku.
Izibonelelo zezindlu zangasese eziseludongeni
1, Ixabiso eliphezulu
Indlu yangasese eseludongeni inokuvezwa ngaphandle kumbhobho wamanzi amdaka angabonakaliyo ukufihla, ungasaziboni iindidi zemibhobho, uphucule imeko yabantu, kodwa vumela nendawo ngephanyazo ukuba ibe nkulu kwaye ibanzi.
2, Easy ukucoca
Kwabanye abantu abanomzimba ococekileyo, indlu yangasese eludongeni ilunge kakhulu. Ayinangxaki ekucoceni ikona efileyo, ke indlu yangasese kulula kakhulu ukuyicoca.
3, lula ukuhamba
Ukuba indlu yangasese eseludongeni kufuneka itshintshe indawo ebekwe kuyo, ikwakulunge kakhulu ukuhamba, ngaphandle kwezithintelo.
4, ingxolo Low
Ngokubanzi, itanki lamanzi lezindlu zangasese eziqhelekileyo lixhumene ngqo emngxunyeni, ke xa ugungxula indlu yangasese, isandi sokuhamba kwamanzi sikhulu kakhulu, kwaye le ngxolo inokuchaphazela abanye abantu. Indlu yangasese eseludongeni ifihliwe eludongeni kuba itanki yamanzi ifihlwe eludongeni, ngoko ke isandi samanzi okugungxula sincinci kakhulu.
Ukungancedi kwezindlu zangasese eziseludongeni
1, Easy ukwaphula
Iindawo zangaphakathi zangasese eziseludongeni zonakele ngokukhawuleza.
2, umthwalo wokuthwala umthwalo
Ngokomthamo wendlu yangasese, umthwalo ophetheyo wendlu yangasese yomqolo wodonga isezantsi kunaleyo yangaphantsi enoluhlu lwangasese.
Kunzima kakhulu ukulungisa, xa indlu yangasese inengxaki, kunzima ukuyilungisa kwaye kufuneka luvulwe udonga.
Izibonelelo zangasese ezingasebenziyo
1, ingxolo yokugungxula incinci, iphantse yabizwa ngokuba ithi cwaka.
2, amandla okugungxula omelele ngakumbi, kulula ukucoca ilindle elinamathele kumphezulu wendlu yangasese, gungxula licoceke kakhulu, ukuze indlu yangasese ibonakale icocekile.
3, ifuthe anti-ivumba kuthelekiswa nezinye izindlu zangasese kungcono, balahle ivumba lokuhlambela.
Ukungancedi kwindlu yangasese yokuhambisa amanzi esezantsi
1, xa ugungxula, kufuneka ubeke amanzi kumphezulu wamanzi aphezulu ngaphambi kokuba uhlambe ilindle ngokucocekileyo, kwaye usebenzise i-8L ukuya kwi-9L yamanzi ukufezekisa injongo yokugungxula, okuyinkcitho yamanzi xa kuthelekiswa nezinye iintlobo izindlu zangasese.
Ububanzi bombhobho wokuhambisa amanzi umalunga ne-2 cm, ukuba uphosa iphepha langasese kwindlu yangasese, ukugungxula kuya kuvaleka.
Nokuba yindlu yangasese eseludongeni okanye yangasese idreyini, kukho izibonelelo kunye nezinto ezingalunganga, indlela yokukhetha ukhetho oluthile okanye ngokwemikhwa yobuqu oza kuyikhetha, enyanisweni, kuxhomekeke kwizinto ozixabise ngakumbi.
Ngaphambili :: Ingqele Igagasi Kwakhona! Iimveliso zegumbi lokuhlambela, Ungawuthintela njani ubanda? next: Igumbi lokuhlambela elinye lanele, kutheni ufuna amagumbi okuhlambela amabini e-China?
2021 / 04 / 22 2181
2021 / 04 / 12 4728
2021 / 04 / 12 4614
2021 / 04 / 11 4159